Zuva: Kurume 13 kusvika 15, 2019 H098 Mira 4081
Isu takafambira mberi mashandiro ekushandisa nemidziyo, uye imwe yeiyo nyowani yekugadzira tambo inoenderana neEuropean FDA mugore ra2018. Yedu hombe mhuka yezvigadzirwa inosanganisira jekiseni, poda, premix, piritsi, yemuromo mhinduro, yekudururira-pane mhinduro, uye disinfectant. Izvo zvese zvigadzirwa zvine akasiyana maratidziro ...
Weierli Boka, imwe yepamusoro 5 yakakura GMP inogadzira & mutengesi wemishonga yemhuka muChina, iyo yakavambwa mugore ra2001.Tine mafekitori mana ebazi uye 1 kambani yekutengesa yepasi rese uye takatumirwa kune dzinopfuura nyika makumi maviri. Tine vamiririri muEgypt, Iraq nePhili ...
Yedu mhando manejimendi manejimendi inosanganisira ese maficha ehunhu ane chekuita nezvivakwa, zvigadzirwa, uye sevhisi. Nekudaro, manejimendi manejimendi haana kungotarisa pane chigadzirwa uye sevhisi mhando, asi zvakare nzira dzekuzviwana. Yedu manejimendi iri kutevedzera mabhenefiti esisitimu: 1. Mutengi Kutarisisa 2. ...